Wariye Afka U Dhacay
HomeWararka MaantaWariye Afka U Dhacay
13/11/2016 Abdiwahab Ahmed
Ciyaaraha mararka qaarkood waxa lagu arkaa arrimo xiiso leh, gaar ahaanna qosolka iyo riwaayadaha dhinacooda u leexanaya. Ciyaartay dharku ka siibtay, mid qalaama-rogtay, mid simbirixday, mid wax xagga taageereyaasha kaga soo dhaceen, mid kamarad jiidha iyo mid wariyeyaal dul maraba.
Waddanka Ingiriiska ayaa waxa toddobaadkan aad loo hadal hayey, fal ka dhex dhacay difaacyahanka Chelsea ee David Luiz iyo wariye si toos ah u tebinayey war wakhti uu ku sugnaa garoonka tababare ee Chelsea.
David Luiz oo qorshaynaya weerarka wariyaha
Wariyaha oo si toos ah faalladiisa ugu gudbinaya daawadeyaashiisa kala duwan, ayaa waxa xagga dambe kaga yimid David Luiz oo labada lugoodba isaga qaaday, isla markaana afka u geliyey kamaraddii laga duubayey wariyaha, kaddibna inta uu ka daba-tegay dhexda soo qabtay ka hor intii aanu wejiga ku dhufan kamaradda ee aanu khasaare dhicin.
Luiz oo arrintan ka dhiganayey madadaalo, ayaa waxa laga bixiyey faallooyin kala duwan, kuwaas oo qaarkood u fasireen in ay ahayd arrin kaftan ah ama dareenka daawadeyaasha uu uga gol lahaa ciyaartoyga in uu u jeediyo meel kale oo ah falka uu sameeyey. Kuwo kale oo xirfadda iyo shuruucdeeda ilaaliya, waxay sheegeen in meel lagaga dhacay wariyaha shaqadiisa ku jira, ciyaartoyguna uu sameeyey masuuliyad darro ah in uu ka baxay xadkii u dhexeeyey isaga iyo wariyaha.
Wariyahan ayaan ka shaqeeya telefishanka CHELSEA ay iska leedahay.
Griezmann Oo Xulka France U Diray Rubuc Dhamaadka Euro 2016
26/06/2016 Abdiwahab Ahmed